Ividiyo epheleleyo yenqaku eliyizolo ngoku iyafumaneka kwiwebhusayithi yeApple | Ndisuka mac
Ividiyo epheleleyo yenqaku eliphambili izolo liyafumaneka kwiwebhusayithi yeApple
Izolo iApple ibibambe enye yeenkomfa ezilindelweyo ngenxa yenani elikhulu lamahemuhemu anxulumene nayo kwaye yalatha kwinani elikhulu leziganeko, iminyhadala eyayingadibananga kuphela neentetho zesoftware ka-Apple. Ukongeza kuzo zonke iindaba ezivela kwisandla sazo zonke iinkqubo zokusebenza, u-Apple ukwazisile nge-10,5-intshi ye-iPad Pro, imodeli eza kwintengiso ithathe indawo ye-9,7-intshi iPad Pro. Ubuye wazisa i-HomePod, isithethi esiphathwayo esinemisebenzi efanayo naleyo yenziwa likhaya likaGoogle kunye neAmazon Alexa.
Ngokuchasene nazo zonke iingxaki, iApple ayikhange ivuselele iMac, kodwa ibonise iMac Pro, imodeli yePro enikezela ngemizobo engakholelekiyo kunye namandla okuqhubekeka, kunye nexabiso layo lokuqala. IMacBook Pro isungule ngaphantsi konyaka ophelileyo kwaye iMac iphinde yahlaziywa, ibaxhobisa ngesiqhubeko se-Intel Kaby Lake sesizukulwane sesixhenxe.
I-Keynote, esele ihlale ngaphezulu kweeyure ezimbini, ngoku iyafumaneka kwiphepha le-Apple ngokusebenzisa ikhonkco elilandelayo, intetho ephambili ethi nangaliphi na ixesha ibe nzima, kuba amakhwenkwe avela eCupertino alinganise ixesha elinikezelweyo kwinkcazo yomntu wesithathu.
Ukuba ufuna ukufikelela kuwo omabini la mazwi aphambili kunye nazo zonke ezadlulayo okanye ezo zenziweyo kwezi ntsuku, iApple yenza ukuba isicelo seWWDC sifumaneke kubasebenzisi be-iOS, isicelo esenzelwe abaphuhlisi ukuze bakwazi ukufikelela kumasifundisane ukongeza ukufikelela kuzo zonke iividiyo ezirekhodwayo ngelixa zisenziwa.
Kwiintsuku ezimbalwa, iApple iyakuxhoma le ntetho iphambili kwisiteshi sakhe seYouTube, apho ihlala ixhoma zonke iividiyo zolu hlobo lomsitho, kunye nazo zonke izibhengezo ezizazisa kwintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ividiyo epheleleyo yenqaku eliphambili izolo liyafumaneka kwiwebhusayithi yeApple
Ingqokelela entsha yeApple Bukela amaqela ehlobo
I-Apple yandisa inkqubo ye-beta yoluntu kwi-tvOS